Igumbi Elihle Kufuphi neTbilisi Nezithuthi Zoluntu - I-Airbnb
Igumbi Elihle Kufuphi neTbilisi Nezithuthi Zoluntu
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguArchil
Yonwabela ukubuka iindwendwe okumuncis 'iintupha kwesibini uAvtandil noMariam, kwiflethi okanye indlu ekwicomplex enefenitshala etofotofo kufutshane naseTbilisi. Indawo yokumisa izithuthi zikawonke-wonke ikufutshane neflethi okanye indlu ekwicomplex ibe unokuba phakathi kwesixeko esikhulu kwimizuzu eyi-30.
I-Avtandil ngumenzi wewayini kwaye uMariam ngumpheki omangalisayo, baza kukuphatha ngewayini kunye nokutya okumnandi kwaseGeorgia suku ngalunye. Ukuba ufuna ukuhambahamba eAvtandil uza kunikezela ngeenkonzo zakhe njengomqhubi ngamaxabiso abathandi bexabiso kuneli lentengiso.
Igumbi likufutshane neTbilisi, kwidolophu enomtsalane yaseRustavi. Indlu ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukusuka kwiziko lezothutho kwaye ngezithuthi zikawonke-wonke kuthatha malunga nemizuzu eyi-35 ukuya kumbindi weSixeko saseTbilisi, kufutshane neFreedom Square, iRustaveli avenue, iAgmashenebeli avenue, okanye iPekini Avenue.
Igumbi lingaphakathi kwigumbi le-4 elinomtsalane nelinobugcisa, apho ababuki zindwendwe be-Avtandil noMariam bahlala khona. I-Avtandil ngumenzi wewayini kwaye uMariam ngumpheki ongaqhelekanga abaza kukuphatha ngewayini esemagqabini kunye nokutya okumnandi qho ekuseni. Kwaye u- uza kukuphekela isidlo sangokuhlwa ukuba uyafuna.
Igumbi linebhedi enkulu kunye nekhabhathi, kunye nendawo yokusebenzela, apho iindwendwe ziza kuba nethuba lokusebenza xa kufuneka njalo. Uza kunikwa amashiti neetawuli ezicocekileyo xa ufika.
Indlu ixhotyiswe ngento eyenza kufudumale, ineintanethi EKHAWULEZAYO KUNYE NEWIFI, igumbi lokuhlambela lihlala licocekile ibe amanzi ashushu asoloko ebaleka, ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ndifake umyalezo ibe ndiza kuphendula nawuphi na umbuzo onawo.
Igumbi likufutshane neTbilisi, kwidolophu enomtsalane yaseRustavi. Le dolophu idume ngokuvelisa ishishini layo elisindayo, elishiyekileyo elinokufunyanwa kuyo yonke le ndlela. Le dolophu inomtsalane wezakhiwo ngokukhethekileyo ngexesha likaStalin.
Ukubuka le dolophu yinto evuyisayo, apho unokufumana into entsha mzuzu ngamnye, le ndawo yindawo yabafoti nabazobi. Ngorhatya ungahamba-hamba kwiibhari nakwiibhari uze uncokole nabantu basekuhlaleni ngoxa usela ibhiya yasekuhlaleni uze umamele umculo odlalwa kwiiDuduks nakwiDrums.
Awumele ulibale ukuba iRustavi ikwayizulu yabathandi bemidlalo eyingozi, apho unokuqesha khona iiPolaris Dune buggies, iRough area KTM Enduro iibhayisikile kunye nokukhwela iinduli ezinemibala egqamileyo. Ungabukela okanye uthathe inxaxheba kwiFormula 2 okanye umdyarho obakho kabini ngeveki kwi-Rustavi International Motorpark. Ngaphezu kwako konke ungalondoloza usuku lwento onokuyonwabela ye-paragliding ukusuka entabeni ye-Ialguja okanye kwiindawo ezikufutshane ezinemimoya enamandla.
Umbuki zindwendwe ngu- Archil
UAvtandil noMariam, ababuki zindwendwe bayafumaneka ukuba bancede nanini na. Baza kukunceda ukuba uhambe, bakuxhase ngokuceba uhambo lwakho, bakunike indawo yokuya nokubuya kwisikhululo seenqwelo-moya nanini na ufuna. Ngaphezu kwako konke ukuba unqwenela ukuthatha uhambo losuku oluya eGeorgia baza kukunceda ukhusele isithuthi ngamaxabiso afikelelekayo.
Ukuba unqwenela ukuthenga ubusi, iwayini, i-churckhela, i-chiri okanye naziphi na izidlo eziphilayo zasekuhlaleni ziza kunceda ekukhetheni iimveliso ezisemgangathweni.
UAvtandil noMariam, ababuki zindwendwe bayafumaneka ukuba bancede nanini na. Baza kukunceda ukuba uhambe, bakuxhase ngokuceba uhambo lwakho, bakunike indawo yokuya nokubuya kwisikh…